Shina Birchwood FSC voajanahary azo havaozina vita amin'ny namboarina vita amin'ny novoizina Gianty
Birchwood FSC voaova voajanahary azo havaozina
Ny cutlery dia vita amin'ny 100% FSC®hazo voamarina. Ampiasainay ny hazo birch azo havaozina ho an'ny kitaponay satria izy dia karazan-kitay maniry haingana be. FSC®dia fenitra eran-tany ho an'ny ala maharitra ary manome antoka izy ireo fa ny hazo tsirairay izay tapaka, dia misy hazo vaovao nambolena. Ny FSC®ny fenitra koa dia miambina ny zavamaniry voajanahary sy ny biby. Tsy mety vita ny natoronay ka azonao fangaro vita amin'ny voajanahary 100% izay azo alaina tanteraka.
Ny antsy vita amin'ny hazo dia vita amin'ny hazo birch azo havaozina 100%. Birch hazo dia fantatra fa loharanom-boankazo maniry haingana ary ny FSC® dia manome antoka fa ny hazo dia avy amin'ny ala tantanana maharitra. Nanome antoka izy ireo fa ny hazo rehetra izay tapaka, dia misy hazo vaovao nambolena. Ny FSC® koa miantoka fa ny flora sy ny biby no karakaraina. Ny namboarina dia vita amin'ny hazo tsy misy pentina mba ahafahanao manantena tsiro kely kely voajanahary rehefa mampiasa azy ireo. Mety tsara amin'ny fitsangatsanganana amin'ny lohataona, ny an'ny BBQ ary esorina.
Ny koba plastika dia mitondra fandotoana. Na dia aorian'ny taona an-jatony maro aza, tsy voakorontana tanteraka ireo entana nariana ireo. Momba ny krizy, dia manolotra mpanjifa birao hazo vita am-baravarankely izay manome aingam-panahy ny voajanahary sy ny aura azy .Ny hazo ny hazo manjavozavo tsy misy masirasira ary ilaina amin'ny ezaka ara-barotra maro. Tsy ilaina ny milaza, rehefa mikasika ny takelaka compostable, tsy misy maharesy ny entana Birchwood. Namboarina tamin'ny hodi-jaza sy nalaina tamina birch ny hoso-doko raha tsy naratra hazo.
• Vita avy amin'ny FSC® voamarina Birchwood
Item Wooden 160mm Knife
Material Hazo Birch
Isan'ny carton 10000 pcs
Fonosana isaky ny baoritra Fonosana 100
Haben'ny baoritra 45 * 34 * 39cm
Item Wooden 160mm Fork
Haben'ny baoritra 58 * 40 * 33cm
Item Wooden 160mm Spoon
Haben'ny baoritra 60 * 42.5 * 33cm
Previous: 100% vita amin'ny voavidy vita an-tsambo 100%
Manaraka: CPLA Famokarana Plastika vita amin'ny plastika tsy misy rano azo havaozina azo alaina